Manoratra orinasa mpametaka penina penina | Shina manoratra penina marika marika marika, mpamatsy
50ML malefaka manoratra loharano penina milanja fitaratra tavoahangin-tsolika ho an'ny mpianatra
Ranomainty avo lenta, esory ny fametrahana ranomainty, ialao ny fisehoan-javatra tsy manelingelina ny rano rehefa manoratra.
Aza miovaova, tazomy ny mando, nosoratany mora foana ny nib.
Mahazaka rano, loko maharitra, tsy misy fofona hafahafa izy io.
30ml tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy lohataona famenon-tsolika famenoana famenon'ny biraon'ny mpianatra 24 loko
100% vaovao sy avo lenta
Famafana maina ny famafana marika fotsy ho an'ny plastika ho an'ny sekoly, birao, orinasa mpamokatra pen
Tinta misy loko mamirapiratra, mora maina. Ny loko dia tsy mora miala.
Ampio ity ranomainty ity amin'ny penina marika fotsy, azo ampiasaina indray ny penina. Izay ara-toekarena.
Ny vavan'ilay tavoahangy ranomainty dia manokana, afaka misoroka ny famoahana rehefa mampiditra ranomainty. izay mety sy mora ampiasaina.
Mety amin'ny penina fotsy.
Safidy tsara ho an'ny namanao sy ny tenanao izany.
Refill Ink ihany, fampisehoana fampitaovana hafa amin'ny sary dia tsy tafiditra ao.
Fanoratana penina maharitra marika amin'ny metaly, plastika, seramika, hazo, vato, baoritra sns
Azo ampiasaina amin'ny taratasy mahazatra izy ireo, fa ny ranomainty kosa dia miraraka amin'ny rà mandriaka ary hita amin'ny lafiny iray.
Tavoahangy 1000ml Tavoahangy penina izay mameno ny tavoahangy fitaratra isan-karazany
Ny OBOOC dia mitondra karazan-dranomainty penina loharano tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny, amin'ny 70% amin'ny fivarotana antsinjarany.
60ml Manoratra malefaka tavoahangy fitaratra tavoahangin-tsolika Fantsom-baravaran-tsoratry ny mpianatra famenon-tsofina ho an'ny sekoly famenon-penina
Ny tavoahangin-dranomainty avy amin'ny loharano penina dia refy mety indrindra hitsapana na hanandramana. Ity ranomainty kely kely kokoa ity dia tonga ao anaty tavoahangy fitaratra izay azo ampiasaina indray rehefa foana izy ireo.
25L Fantsom-boaloboka barika / fametahana penina ho an'ny famenoana tavoahangy kely
Misaotra anao nanohana ny ranomainty OBOOC.
Nampiditra karazana loko ranomainty isan-karazany izahay ho karazana tavoahangy sy karazan-tsolika.
Vao tsy ela akory izay no nandefasanay inks pigment sy "Mix Free Ink", izay ahafahanao manamboatra loko ny ranomainty tianao indrindra.